Fomba fanazaran-tena hampiatoana amin'ny telework | Bezzia
Tony Torres | | fanatanjahan-tena
Ny teleworking dia fotoana mety hanatsarana ny asa maro ary ho an'ny olona maro, fotoana iray ahafahana mampifanaraka ny fiainam-pianakaviana amin'ny fiainam-piasana. Na eo aza izany, na dia misy tombontsoa maro aza ny fifandraisan-davitra, ny fanovana ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-tsosialy dia nanova ny fiainan'ny olona maro. Tsy misy intsony ny fotoana ahafahana miresaka amin'ny fiatoana kafe, na manome hevitra momba ny mpiara-miasa amin'ny faran'ny herinandro.
Ankehitriny dia tsy misy firazanana hahazoana miasa ara-potoana ary ny fomba fiaina mipetrapetraka dia misy mihoatra noho ny hatramin'izay. Ireo antony rehetra ireo dia mihoatra noho ny ampy mba hahitana fomba hampiatoana amin'ny fifandraisan-davitra. Ary inona no fomba tsara kokoa hanafahana ny sainao sy hiasa ny vatanao toy izay amin'ny fampiofanana tsara. Raha mila fanampiana ianao amin'ny fampihetseham-batana ary esory amin'ny telecommunications, mariho ireto torohevitra manaraka ireto.
1 Fiofanana hiala amin'ny telework
1.1 Misavoana amin'ny fijanonana hita maso
1.2 Kibo miasa sy glute
1.3 Kardio misy vokany ambany
1.4 Mandehana mitsangatsangana ary manaova fanazaran-tena hampiatoana amin'ny fifandraisan-davitra
Fiofanana hiala amin'ny telework
Telework Tsy midika hoe misy 24 ora isan'andro, izany no zavatra voalohany tokony hampidirinao ary ampitao amin'izay ilaina. Ny fahasalamanao ara-batana sy ara-tsaina dia hitaky anao fiatoana sasany mba tsy hiteraka vokany ratsy ny fifandraisan-davitra. Noho izany, raiso tsara ny fiatoana tokony horaisinao mba hiala amin'ny teleworking sy ny fomba ahafahanao manatsara ny fiofananao mandritra ny andro.
Misavoana amin'ny fijanonana hita maso
Ny fisorohana ny loza mety hitranga amin'ny asa dia milaza fa ny mpiasa tsirairay dia manan-jo amin'izany Fiatoana 5 minitra isaky ny ora miasa. Izany dia ho an'ireo olona miasa eo alohan'ny solosaina na eo amin'ny latabatry ny birao. Ilaina ny fijanonana an-tsary mba hanafahana ny masonao amin'ny efijery ary hanenjana tsara ny hozatra ao amin'ny vatanao. Ary eto no anananao fotoana fampiofanana voalohany.
Isaky ny fijanonana hita maso Araraoty ny fotoana hanaovana vozony sy lamosina miverina. Afindrao aloha ny lohanao amin'ny sisiny, mankany amin'ny soroka, avereno in-5 isaky ny lafiny. Avy eo, atsofohy amin'ny ilany iray ny lohanao ary amin'ny tanana mifanohitra mifanindry moramora eo an-doha mandritra ny 10 segondra. Avereno ny mihinjitra amin'ny lafiny mifanohitra.
Mipetraha eo amin'ny seza fiasanao ary aondriho mankany aloha ny lamosinao, mitondra ny loha amin'ny tany ary mikasika ny seza amin'ny tànany. Tazomy mandritra ny 30 segondra ny paozy ary avereno in-3-4 ny fampiharana.
Kibo miasa sy glute
Araraoty izao ny iray amin'ireo fiatoana lavitra hampiasana ny kibony sy ny vodiny, izay tena voakasiky ny fifandraisan-davitra. Mametraha tsihy amin'ny tany ary manaova sit-up toy izao. Nivelatra tamin'ny tany niaraka tamin'ny ny tongotra miaraka mifintina mafy nefa tsy mampihetsika ny vatan-kazo sy midina nefa tsy mikasika ny tany. Manaova seta telo miaraka amin'ny repoblika 10 avy, mamela ny 10 segondra fitsaharana eo anelanelany.
Ny plancan'ny kibo no fanatanjahan-tena haingana sy mahomby indrindra ahafahanao miasa sy manatanjaka ny vatanao. Eo amin'ny tsihy, vy mandritra ny 1 minitra. Mandria amina minitra iray hafa ary avereno ilay fanatanjahan-tena. Raha tsy tsara endrika ianao, atombohy mandritra ny segondra vitsy ary manamboara araka ny avelan'ny vatanao azy.
Kardio misy vokany ambany
Rehefa avy niasa ianao dia makà minitra vitsivitsy hanaovana kardio misy vokany ambany. Azonao atao ny mampiasa singa toy ny bisikileta fanatanjahan-tena, stepper na tady mitsambikina. Na dia tsy manana an'ireto fitaovana ireto ianao dia afaka manao zavatra tena tsotra, mihazakazaka eny an-toerana mandritra ny 15-20 minitra farafahakeliny. Azonao atao ny mifandimby mitsambikina amin'ny andaniny roa ary manao fihetsiketsiky ny sandry hanatsara ny fampihetseham-batanao.
Mandehana mitsangatsangana ary manaova fanazaran-tena hampiatoana amin'ny fifandraisan-davitra
Tsy misy fanazaran-tena tsara kokoa hampiatoana amin'ny fifandraisan-davitra noho ny mandeha mitsangatsangana isan'andro, na mialoha na aorian'ny asa. Miaina rivotra madio, miampita làlana miaraka amin'ny olon-kafa ary mankafy fiofanana ivelany no antony manosika indrindra.
Telecommuting dia azo ampiharina, ahazoana aina ary zavatra tadiavin'ny olona an-taonany maro, saingy tsy hoe tsy misy ny fihemorana. Amin'ny ambaratonga ara-batana, ilaina ny manao fanatanjahan-tena mba tsy hahamarika ireo vokany ireo. Ampiharo ity fanazaran-tena fanazaran-tena ity mba hiala amin'ny teleworking ary hikaroka fotoana fohy handaozana ny trano, hisaotra anao ny vatanao sy ny sainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Fomba fanazaran-tena hampiatoana amin'ny telefaona
Ny fahazarana ratsy isan'andro izay miteraka mony